Ungamazi kanjani umzali onobuthi | Bezzia
Ungamazi kanjani umzali onobuthi
UMaria Jose Roldan | 19/03/2021 22:39 | Fundisa izingane
Kuyaqabukela ukuthola umzali obonayo ukuthi unobuthi enganeni yakhe nokuthi ukukhuliswa okunikeziwe akwanele. Ukuba ngumzali omuhle kuncike kakhulu kuzindinganiso ezinikelwe enganeni yakho ngesikhathi senqubo yokufunda komntwana. Ubaba kumele asize ingane yakhe ubuntu obulungile nokuziphatha okufanele.
Uma kungenjalo, umzali kungenzeka ukuthi akenzi kahle nhlobo futhi uthathwa njengomzali onobuthi. Esihlokweni esilandelayo sinemininingwane izici ezaziwa njengabazali abanobuthi ngokuvamile zinazo nokuthi ungayilungisa kanjani ukuze inqubo yokuba ngumzali ibe ngcono kakhulu.
1 Ukuzivikela ngokweqile
2 Kubucayi kakhulu
5 Bafaka ingcindezi ezifundweni
6 Kubi futhi akujabulisi ngomhlaba
Ukuvikelwa ngokweqile kungenye yezimpawu ezicacile futhi ezisobala zomzali onobuthi. Ingane kufanele ibhekane namaphutha ewenza ngoba lokhu kuzomsiza ukuthi akhe ubuntu bakhe kancane kancane. Ukweqiwa ngokweqile kwengxenye yabazali akukuhle ekukhuleni okuhle kwengane.
Akusizi ngalutho ukusola nokugxeka izingane ngaso sonke isikhathi. Ngalokhu, ukuzethemba nokuzethemba kwezingane kuyekelwa phansi kancane kancane. Ngokufanelekile, bahalalisele ngempumelelo yabo nezinhloso zabo. Ukugxekwa ngabazali kushiya izingane zivikela ngaso sonke isikhathi futhi zizizwe zingelutho kukho konke ezikwenzayo.
Abazali abanobuthi ngokuvamile banobugovu ezinganeni zabo. Aziziniki izidingo ezahlukahlukene izingane ezinazo futhi zizicabangela zona kuphela. Ubugovu buba nomthelela omubi esimweni sengqondo somntwana futhi kungadala ukukhathazeka nokudangala okukhulu.
Igunya eleqile kungesinye sezici ezicacile zabazali abanobuthi. Abakwazi ukuguquguquka kunoma yikuphi ukuziphatha kwezingane zabo futhi baphoqelela igunya labo ngaso sonke isikhathi, okudala umuzwa wecala ezinganeni. Ngokuhamba kwesikhathi lezi zingane zikhula zibe nezinkinga eziningi ezingokomzwelo lokho kuthinta kabi impilo yakho yansuku zonke.
Bafaka ingcindezi ezifundweni
Awukwazi ukuphoqa ingane ukuthi ifunde into engayifuni. Abazali abaningi bacindezela izingane zabo ukuba zikhethe umsebenzi othile ngaphandle kokubheka ukuthi zifunani ngempela.
Kubi futhi akujabulisi ngomhlaba
Abazali abanobuthi abajabule ngaso sonke isikhathi futhi abajabule ngempilo abayiphilayo. Lokhu kunganaki nokungabi nathemba kutholwa yizingane ngazo zonke izinto ezimbi ezibandakanya lokhu. Ngokuhamba kwesikhathi baba yizingane ezidabukisayo nezingeneme ezingagculiseki ngalutho.
Ekugcineni, ubuthi bomzali bumuncwa yizingane, okuthile okugcwaliseka lapho ufinyelela esigabeni sabadala. Abazali kumele bakhulise izingane zabo bacabangele uchungechunge lwamagugu afana nenhlonipho noma uthando ukuqinisekisa ukuthi bangabantu abalungile esikhathini esizayo. Kubalulekile ukuthi izingane zikwazi ukukhula ngokugcwele futhi zingazilinganisi ngendlela yokuhlukumeza.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Fundisa izingane » Ungamazi kanjani umzali onobuthi
Khulisa kuvulandi wakho, wakhe ingadi yasemadolobheni
Kubalulekile ukwakha igumbi lokuwasha ekhaya